बर्दिया अस्पतालमा १२ सय ग्रामको बच्चा एक महिनाको उपचारपछि डिस्चार्ज • Health News Nepal
काठमाडौं, २५ बैशाख २०७९
बर्दिया अस्पतालमा गुलरिया नगरपालिका–३ बर्दियाकी सुशिला गोडियाको शल्यक्रिया गरेर सात महिनाको जुम्ल्याहा बच्चा मध्ये एक बच्चाको ज्यान जोगिएको छ।
गोडियालाई असहज भएपछि उहाँ चैत १५ गते जिल्ला अस्पताल गुलरिया पुग्नुभयो । उहाँ गर्भवति भएको केवल २९ हप्तामात्रै भएको थियो । चिकित्सकहरुले भिडियो एक्स रे गरेर हेर्दा गोडिया पेटमा दुई बच्चा देखिए । एउटा मृत अवस्थामा थियो भने अर्को बच्चा जिवित्तै रहेको थियो।
करिब ३१ प्रतिशत शिशु महिना नपुगी जन्मिएका कारण कम तौलका हुन्छन्। जन्म तौल २६ सय ग्राम भन्दा कम भएमा शिशुलई विभिन्न किसिमको स्वास्थ्य समस्या आउँछ र मृत्यु हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ।
गर्भवतीको अवस्था जटिल देखिएपछि अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सुभाष पाण्डेको नेतृत्वमा बालरोग विशेषज्ञ डा. विश्वनाथ शाह र स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डा. केशर चौधरी, एनेस्थेसिया असिस्टेन्ट राजेश बर्मा र ओटी इन्चार्ज सृजना ज्ञवालीले सफल शल्यक्रिया गरेका हुन्। गोडियाको श्रीमानसँगको छलफलपछि शल्यक्रिया गरेर मृत बच्चा निकाल्ने सहमति पछि अर्को बच्चा पनि महिना र तौल नपुगेकाले शल्यक्रिया गरेर निकालेपनि जोगाउन मुस्किल रहेको थियो । तर गोडियाका श्रीमानको अनुमतिपछि चिकित्सकहरुले शल्यक्रिया गरेका हुन्।
बच्चाको तौल १२ सय ग्राम मात्र थियो । शिशुलाई एनआईसीयूमा राख्नै पर्ने अवस्था भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सुभास पाण्डेले बताए। डा. पाण्डेका अनुसार हामीसँग एनआईसीयू थिएन् । भेन्टिलेटरमै राखेरै भएपनि उपचार गर्ने योजना भएको हो।
‘मुटु र फोक्सोपनि कमजोर थियो र ‘८–१० दिनसम्म भेन्टिलेटरमा राखेर ३४ हप्ता भन्दा कम समयमा जन्मिएका शिशुको फोक्सो कमजोर हुन्छ । त्यसका लागि सरफेक्टेन्ट औषधि दिनु पर्छ । तर यो औषधि जिल्ला अस्पताल बर्दियामा मात्र होइन् नेपालगन्जमा समेत पाउन मुस्किल पर्छ । महंगो पनि भएकाले भारतबाट झिकाउनु पर्छ ।
जन्मिँदा तौल कम भएका शिशुहरू आमाको दूध चुस्न सक्दैनन्। त्यसैले त्यो शिशुलाई दोएर राखिएको आमाकोे दूध एनजी फिडिङ सहायताले खुवाउने गरियो। सरफेक्टेन्ट औषधि दिएपछि शिशुको अवस्था सुधार हुँदै गयो । अहिले ४० दिन पुग्दा शिशुले आफै आमाको दूध चुस्न थालेको र तौल पनि १२ सय ग्रामबाट बढेर १६ सय ग्राम पुगेको डा. पाण्डेले बताए। बच्चाको मुटुको धड्कन थोरैमा १२० र बढीमा १६० हुनुपर्छ। बच्चामा मुटुको धड्कन एकनासको थिएन। पानीको कमीका कारण ७ महिनामा पानी ५ सेन्टीमिटर भन्दा तल रहेको थियो। शुरुमा मुटुको गति नियमित थिएन । जसको कारणले फोक्सो कमजोर हुने हुन्छ।
कम तौल जन्मिएको बच्चालाई हुर्काउन राम्रो स्याहार गर्नु पर्छ। घर जाँदैमा बच्चाको स्याहार पूरा हुँदैन। वेलावेलामा डाक्टरलाई जँचाउने, सुझाव अनुसारको स्याहार पुर्याउनु पर्ने अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा. विश्वनाथ शाहले बताए। डा. शाहका अनुसार घर पठाउनु अघि अभिभावकलाई यही कुरा सिकाएर शिशुलाई डिस्चार्ज गरेका छौं ।
Tags: #government of NepalBardiya hospitalCorona Virus #Covid19Dr. Subhash Pandey
होली घरमै बसेर मनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन